Garsoorka dhex dhexaadin doona kulanka La Liga ee kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona oo lagu dhawaaqay – Gool FM
(La Liga) 20 Nof 2018. Guddiga garsoorayaasha xiriirka kubada cagta ee dalka Spain ayaa ku dhawaaqay liiska garsoorayaasha ay ugu tala galeen inay dhex dhexaadiyaan kulamada 13-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain.
Jesús Gil Manzano ayaa dhex dhexaadin doono kulanka xiisaha badan ee horyaalka La Liga ay maalinta Sabtida soo aadan ay ku wada ciyaari donaan kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona garoonka Wanda Metropolitano, kaasoo ka tirsan kulamada 13-aad, isla markaana laga daawaan doono saacada geeska Africa 10:45 daqiiqo.
Intaas waxaa sii dheer, in xiriirka kubada cagta Spain ay ku dhawaaqeen in garsoore Juan Martínez Munuera uu dhex dhexaadin doono kulanka Eibar iyo Real Madrid kaasoo isna maalinta sabtida ka dhici doono garoonka kooxda Eibar ee Ipurua Municipal Stadium waxaana la daawan doonaa 15.00.
Si kastaba Barcelona ayaa hogaanka u heysa horyaalka La Liga ee dalka Spain iyadoo leh 24 dhibcood, halka Sevilla iyo Atletico Madrid ay kaalinta labaad ku jiraan waxyna leeyihiin min 23 dhibcood, taasoo la micno ah in Blaugrana ay lumin doonto hogaanka, hadii ay guuldaro kala kulanto kooxda Atletico Madrid.
Dhanka kale Real Madrid uu hogaaminayo Santiago Solari ayaa waxay dhanka kala sareynta horyaalka La Liga ee dalka Spain kaga jirtaa booska 5-aad, kadib markii ay soo aruursatay 20 dhibcood, kaliya 3 dhibcood ayay u jirtaa booska kaalinta 2-aad ay fadhiyaan kooxaha Sevilla iyo Atletico Madrid.